Ankadikely Ilafy : Nirefodrefotra ny basy, épicerie iray voatafika -
AccueilSongandinaAnkadikely Ilafy : Nirefodrefotra ny basy, épicerie iray voatafika
Nisehoana fanafihana mitam-piadiana mahery vaika indray teny amin’ny fokontany Antanetibe, kaominina ambanivohitr’Ankadikely Ilafy ny harivan’ny talata lasa teo tokony ho tamin’ny 06 ora sy fahefany. “Epicerie” iray no lasibatra tamin’izany, izay voaroba vola mitentina iray Tapitrisa Ariary. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena, dia telolahy nitondra basy sy sabatra no nanatanteraka ity asa ratsy ity. “Nanapoaka basy indroa izy ireo talohan’ny nidiran’ilay jiolahy nitondra sabatra tao amin’io tsena fivarotana enta-madinika sy fotsim-bary voatafika io. Niandry teo ivelany kosa ireo roalahy ambiny”, hoy ny fanamarinam-baovao avy eo anivon’ity vondron-kery ity. Vantany vao nahita ny fiavian’ireo olon-dratsy moa ny tompon’ilay tsena, dia nitsoaka avy hatrany noho ny tahotra.
Namantana teo amin’ny fitoeram-bola kosa ilay jiolahy niditra an-keriny tao an-toerana. Rehefa voaroakan’izy ireo ny vola rehetra dia nitari-dositra nitsoaka ireto farany, ary mbola nanapoaka basy fanintelony indray hampihorohoroana sy hanakanana ireo olona tsy hanaraka. Tsy nisy ny aina nafoy na ny naratra na dia teo aza izay poa-basy nirefodrefotra in-telo izay. Ny olona rahateo namonjy fodiana sy nanidy varavarana avokoa vantany vao naheno ity tranga ity. Nidina teny an-toerana avy hatrany moa ny zandary avy eny amin’ity kaominina ity sy avy eny amin’ny fokontany Ambatobe fotoana vitsy taorian’ny fampandrenesana nataon’ny filoham-pokontany, saingy efa dify tsy hita intsony ireo olon-dratsy, na dia nanao izay ho afany hanenjehana azy ireo aza ireo mpitandro filaminana. Mitohy noho izany ny fanadihadiana sy ny fikarohana.
Tontosa omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ny dinika politika andiany fahenina, hiarahan’i Madagasikara amin’ny vondrona eoropeanina. Ny Filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny masoivohon’ny Vondrona Eoropeanina eto amintsika, Benedito Sanchez, no nitarika izany notronin’ireo mpikambana eo ...Tohiny